M/weyne Trump oo weerar afka ah ku qaaday Reps. Ilhan Cumar magaalada Minnesota… – Hagaag.com
M/weyne Trump oo weerar afka ah ku qaaday Reps. Ilhan Cumar magaalada Minnesota…
Posted on 12 Oktoobar 2019 by Admin in World // 0 Comments
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donlad Trump ayaa mar kale weerar afka ah ku qaaday Gabadha asalkeeda Soomaaliga yahay ee Ilhan Cumar Cumar oo katirsan aqalka Koongareeska Dalka Mareykanka .
Donald Trump oo xalay taageerayaashiisa kula hadlayay gobolka laga soo doorto Ilhan Cumar ee Minnesota ayaa mar kale dhaleeceeyay Xildhibaanada, waxa uuna ku eedeeyay in Ilhan u damqato kooxaha argagaxisada ah sida Al Qaacida.
Waxa uu sheegay Madaxweyne Trump in Ilhan Cumar mas’uul ka aheyd hadalo naceyb ah oo ka dhan ah dadka Yahuuda ah, waxa uuna ku eedeeyay Trump dadka Minnesota in ay doorteen qof aan u damqaneyn.
”Ilhan waxay wax aan weyneyn kasoo qaadday weeraradii 11-kii September ee lagu dilay 3000 oo qof oo dadkeena ka mid ah, oo ay tiri ‘dad baa wax iska sameeyey, sidee qof noocaas ah uu idinkugu matali karaa Minnesota, aad ayaan idinkugu careysanahay dad yahow. Sharaf dhac ayey ku tahay dalkeenna.” ayuu yiri Madaxweyne Trump.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa marar badan weeraro afka ah ku qaaday Xildhibaan Ilhan Cumar oo katirsan Xisbiga Dimuquraadiga, waxa ayna Ilhan inta badan beenisaa eedeymaha uga yimaado Madaxweyne Trump.